खण्डग्रास सूर्यग्रहण समयमा के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ?
> खण्डग्रास सूर्यग्रहण समयमा के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ?
१० पुष २०७६, बिहीबार ०८:२५
काठमाडौं,१० पुस । नेपाल पञ्चांग निर्णयक समितिका अनुसार अहिले बिहान ८ः४२ मिनेटमा ग्रहणले स्पर्श गर्नेछ । पश्चिम र नैऋत्य कोणको बीचबाट बिहान ग्रहण सुरु हुनेछ । बिहान १०ः०१ बजे मध्य हुने ग्रहण ११ः३१ बजे समाप्त हुने पञ्चांग निर्णयक समितिले जनाएको छ ।
पाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले राससलाई बताएअनुसार, ग्रहण लाग्नुभन्दा चार प्रहर (१२ घण्टा) अघि अर्थात् पुस ९ गते बेलुकी ८ः४२ देखि बालक, वृद्ध र रोगी बाहेकले भोजन गर्नु हुँदैन । शास्त्रीय रूपमै यीबाहेकका व्यक्तिमा भोजन निषेध गरिएको उनको भनाइ छ ।
ज्योतिषीहरूका अनुसार, ग्रहणका बेला भोजन, मैथुनलगायतका कार्य वर्जित छन् । तर, वैज्ञानिकहरू भने यसमा सहमत छैनन् ।
र्य ग्रहणको समयमा हुने घटना र गर्न नहुने